Naphezu ukuthuthukiswa esebenzayo ngesayensi nobuchwepheshe ezimpilweni zethu namanje hlala ebalulekile zezinkolelo-ze. Enye ukukhathazeka ezivamile spider ezivamile. Nale kokuba exhumene izinkolelo eziningana. Kodwa kungani hhayi ukubulala izicabucabu, ngoba kubo, bambalwa abantu bazizwe uzwela?
Kwenzekani uma ubulala spider?
Uma sikhuluma izimpawu kazwelonke, lapho bokuhlukaniswa ukuphila besicabucabu encane unga isicupho izinkathazo ezinjalo:
Endlini yakho uze isifo. Ezikhathini zasendulo, abelaphi baye babonisa ukuthi abantu kuwebhu eqoqwe ekhaya, elaphe izifo eziningi. Uma kungenjalo endlini ke lesi sifo kungaba yingozi. Kodwa namuhla kungase kutholakale ukuthi iwebhu akuyona into kwezokwelapha.
Ngesisekelo izibonakaliso, Izicabucabu bakhangwa injabulo, ikakhulu kunethiwekhi yabo. bona "ukubamba" ezinhle usebenzisa zintambo ukuthi ke uhlala endlini kubangcono. Lokhu phambi echaza ukuthi kungani ungakwazi ukubulala izicabucabu ngoba inhlanhla ke ezinhle ngeke.
Kukhona iziphakamiso ukuthi wabulala kumaSiriya "izakhamuzi 'ekhaya lakho, uqiniseka naklichete enkingeni. Ngesikhathi esifanayo - isicabucabu ezincane, amashwa enkulu neyesabekayo ngaphezulu. Kulokhu, lo mthetho ucacisa ukuthi kwakungenzeka ukuthi uma ubulala isidalwa abangakwazi ukuzilwela, kumelwe ukuthwala isijeziso ke.
Uma isicabucabu wahlala phansi wena, ungalindela isipho. Lokhu kusho ukuthi uma ubulala isinambuzane, futhi izindaba ezinhle noma ukumangala, awunakulindela.
Nazi izizathu eziyinhloko echaza ukuthi kungani ungakwazi ukubulala izicabucabu. Kodwa iyiphi ze amabika, njengoba umthetho, zivela anomlando omude.
Ngakho, masikhumbule ukuthi esewusana spider uJesu kukusindisile ekubhujisweni. Lapho wonke umkhaya wabalekela eGibhithe futhi ngakhetha ukuzifihla emhumeni, kwafika besicabucabu. Lokhu kokuba wasibekela obukhulu cobwebs emnyango, futhi ngemva kwesikhashana kukhona ijuba ixazululwe. Abaphikisi, wafika emhumeni, wabona emnyango yene. Bona babeqiniseka ngokuphelele ukuthi lapha isikhathi eside akekho umuntu oye gone futhi baqhubekela. Mhlawumbe le ndaba kubuye kuhlotshaniswe umbuzo wokuthi kungani bengenakuwubulala izicabucabu.
izindaba ezifanayo ube mayelana nezinye ubuntu edume njengoMose noma Mohammed. Kodwa zonke zicishe zifane kakhulu, ngakho uchaze lapha, thina ngeke.
Kodwa, ngesisekelo konke lokhu, singaphetha ngokuthi, lapho izimpawu mayelana izicabucabu umsuka ngenxa yokuthi ukuthi bakhulekela ezikhathini zasendulo. Abantu babecabanga lezi zinambuzane nezidalwa akhuthale futhi ehlakaniphile labasaphila lokukwazi ukwelapha izifo eziningi. Ngakho ukuthi akunakusetshenziswa liyakuphumula ukubulala besicabucabu.
Indlela kungokoqobo izicabucabu ukwelashwa?
Vele uqaphele ukuthi isicabucabu - isinambuzane, okuyinto namuhla alisetshenziswa imithi. ngezici zawo zokwelapha ungazange kwafakazela, futhi ukholwa kokwake akudingekile, ngoba zonke ngokusekelwe ezizathwini.
Ngokwesibonelo, ikhoyili kuwebhu lasetshenziswa isilonda ukumiswa ukopha, kodwa kuphela ukuhanjwa umonakalo ezincane.
Somoya, imfiva kanye nesineke wavunyelwa ukuba yinhlama sewebhu. Ulwazi mayelana ukuthi iye yasiza okungenani umuntu, akukho.
Nokho, kuze kube namuhla lisekhona nanamuhla izimpawu izicabucabu. Ngakho, uma ekuseni ubona isinambuzane, kuba ukuhlupheka kosuku - ukukhathazeka kusihlwa - kuze kube manje, ebusuku - nethemba.
Isiliva Ring of Russia. Veliky Novgorod, Vologda, Staraya Russa - Uhambo
Yini okudingeka for injabulo
Wena ngiphupha guys? Sizokwenza baqonde ukuthi kusho ukuthini lokhu!
Sound akusebenzi emva ufaka "windose 7" - yini okumele ngiyenze?